Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Coronavirus | RayHaber | raillynews
HomeGUUDSu'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Coronavirus
Su'aalaha badanaa la is weydiiyo ee ku saabsan coronavirus
1. Waa maxay Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV)?
Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV) waa fayras la aqoonsaday 13-kii Janaayo, 2020, ka dib markii baaritaan lagu sameeyay koox bukaanno ah oo markii ugu horreysay ku soo ifbaxday astaamaha neef-mareenka (qandho, qufac, neefta oo ku qabata) Gobolka Wuhan dhammaadkii Diseembar. Faafida ayaa markii hore laga helay dadka ku jira cuntada kalluunka badda iyo suuqa xoolaha ee gobolkan. Ka dib wuxuu ku faafay qof ilaa qof wuxuuna ku fiday magaalooyin kale oo ku yaal gobolka Hubei, gaar ahaan Wuhan, iyo gobollada kale ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha.
2. Sidee loo kala qaadaa cudurkaaga Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV)?
Waxaa lagu kala qaadaa neefsashada dhibcaha dhibco ee ku baahsan deegaanka iyadoo hindhisada shaqsiyaadka jiran. Ka dib taabashada sagxad ahaan wasakhaysan qayb ka neefsashada bukaanka, fayraska waxaa lagu qaadi karaa gacmaha gacmaha wajiga, indhaha, sanka ama afka iyadoon la dhaqin. Waa khatar in gacmaha, wasakhda lagu taabto indhaha, sanka ama afka gacmo wasakh leh.
3. Sidee loo gartaa infekshan cusub oo coronavirus ah?
Baadhitaanada molecular-ka ee loo baahan yahay ogaanshaha cudurka cusub ee coronavirus ee 2019 ayaa laga heli karaa dalkeenna. Tijaabada ogaanshaha waxaa lagu sameeyaa kaliya Shaybaarka Tixraaca Virology Qaranka ee Agaasinka Guud ee Caafimaadka Dadweynaha.
4. Ma jiraa daawo-fayras wax ku ool ah oo loo isticmaali karo in looga hortago ama lagu daaweeyo infekshanka cusub ee Coronavirus (2019-nCoV)?
Ma jiro daweyn waxtar u leh cudurka. Waxay kuxirantahay xaalada guud ee bukaanka, daaweynta lagama maarmaanka ah ee daaweynta ayaa la dabaqayaa. Waxtarka dawooyinka qaarkood ee fayrasku waa la baarayaa. Si kastaba ha noqotee, hadda ma jiro dawo waxtar u leh fayras.
Antibiyootigku ma ka hortagi karaa ama daweyn karaa cudurka coronavirus (5-nCoV)?
Maya, antibiyootiggu ma waxyeelo fayrasyada, waxay wax ka tarayaan oo keliya ka hortagga bakteeriyada. Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV) waa fayras sidaa darteed ma aha in loo isticmaalo antibiyootig si looga hortago ama loo daweeyo infakshanka.
6. Intee in le'eg ayaa la qaadanayaa muddada soo-ifbixinta Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV)?
Mudada uu cudurku fayrasku ku dhexjiray waa inta u dhaxaysa 2 maalmood iyo 14 maalmood.
7. Waa maxay calaamadaha iyo cudurrada ay sababaan Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV)?
In kasta oo la sheegay in ay jiri karaan kiisas aan astaamo lahayn, haddana tirakoobkooda lama oga. Calaamadaha ugu caansan waa qandho, qufac iyo neefsasho gaaban. Xaaladaha daran, oof wareenka, neefsashada oo ba'an, kilyaha oo dhinta iyo geeri ayaa laga yaabaa inay soo baxaan.
8. Ayaa saameyn ku yeelan doona Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV)?
Marka loo eego xogta la helay, dadka iyagu da 'weyn leh iyo cudurada lakala qaado (sida neefta, sonkorowga, cudurka wadnaha) waxay halis sare ugu jiraan inay qaadaan fayraska. Xogta hadda jirta, waxaa la ogyahay in cudurka uu ku sii faafayo 10-15% kiisaska, iyo dhimashada ugu dhawaan 2% ee kiisaska.
9. Cudurka cusub ee Coronavirus (2019-nCoV) ma wuxuu keenaa dhimasho lama filaan ah?
Cudurku wuxuu muujinayaa waxyar tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah, sida laga soo xigtay xogta la daabacay ee dadka buka. Maalmaha ugu horreeya, cabashooyinka fudud (sida qandho, cuno xanuun, daciifnimo) ayaa la arkaa ka dibna calaamadaha sida qufaca iyo neefta oo gaaban ayaa lagu daraa. Bukaannadu guud ahaan way culusyihiin si ay u dalbadaan cisbitaalka 7 maalmood kadib. Sidaa darteed, fiidiyowyada ku saabsan bukaanka ku jira warbaahinta bulshada, si lama filaan ah u dhacay oo u bukooda ama dhintaan, kama tarjumeyso runta.
10. In cudurka corona cusub ee laga soo sheegey Turkey (2019-NCover) Ma jiraa kiis?
Maya, cudurka 'Coronavirus' cusub (2019-nCoV) cudurkaan lagama helin dalkeenna (illaa Febraayo 7, 2020).
11. Wadamadee, marka laga reebo Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha (PRC) ayaa halista ugu jira cudurka?
Cudurka ayaa wali inta badan lagu arkaa dadka Jamhuuriyadda Shiinaha. Ifafaalaha lagu arkay waddamada kale ee adduunka waa kuwa ka socda PRC illaa waddamadan. Wadamada qaar, muwaadiniin aad u yar oo ka tirsan PRC ayaa ku bukooday muwaadiniinta dalkaas. Waqtigaan la joogo, ma jiro waddan aan ka aheyn PRC oo kiisaska guryuhu si dhakhso ah ugu faafayaan. Golaha Latalinta Sayniska ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa uga digaya oo keliya PRC "inaan la aadin haddii aysan lagama maarmaan ahayn". Socdaalku waa inuu raaco digniinta masuuliyiinta qaran iyo kuwa caalamiga ah.
12. Maxay yihiin waxqabadyada ay Wasaaradda Caafimaadka ka fuliso arrintan?
Horumarka ka socda adduunka iyo faafitaanka cudurka ee caalamiga ah waxaa si dhow ula kormeeraya Wasaaraddeena. Waxaa loo sameeyay 'New Coronavirus' (2019-nCoV) Guddiga Sayniska. Qiimaynta Halista iyo shirarka Sayniska ayaa loo qabtay cudurka Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV). oo dhan dhinac ee arrinta (Turkey Border iyo Xeebta Agaasinka Guud ee Caafimaadka, Isbitaalka Guud, General Directorate of Adeegyada Caafimaadka Agaasinka Guud ee degdegga ah ee External Relations Agaasinka Guud, sida dhammaan daneeyayaasha) by ay ka mid yihiin dhacdooyinka aan la raacin iyo la Kulankanaga haddii ay sii socoto in la sameeyo si joogto ah.
Kooxo ka shaqeeya saldhigga 7/24 ayaa lagu aasaasay Xarunta Hawlgalka Gurmadka ee Caafimaadka Dadweynaha dhexdeeda Agaasimaha Guud ee Caafimaadka Dadweynaha. Dalkeenna, taxaddarrada lagama maarmaanka ah ayaa la qaaday iyada oo la raacayo talooyinka Ururka Caafimaadka Adduunka. Goobaha laga soo galo dalkeenna sida garoomada diyaaradaha iyo meelaha laga soo galo badda, waxaa la qaaday taxaddar si loogu aqoonsado rakaabka jiran ee laga yaabo inay ka yimaadaan aagagga qatarta ah iyo in la qaado talaabooyinka la qaadayo haddii looga shakiyo jirro. Duulimaadyadii tooska ahaa ee PRC ayaa la joojiyay 1dii maaris. Codsiga baarista kaameeraha kuleylka, oo markii hore loo hirgaliyay rakaabka ka socda PRC, ayaa la balaariyey si loogu daro wadamo kale laga bilaabo 05 Feebarwari 2020.
Tilmaame ku saabsan ogaanshaha cudurka, hababka loo adeegsado kiiska suurtagalka ah, tallaabooyinka ka hortagga iyo xakameynta ayaa la diyaariyay. Algorithms management-ka loogu talagalay kiisaska la aqoonsaday ayaa la abuuray iyo waajibaadka iyo mas'uuliyadaha dhinacyada la xiriira ayaa la qeexay. Hagahan sidoo kale waxaa ku jira waxyaabaha dadka ay aadi doonaan ama ka imaan doonaan wadamada kiisaska ay tahay in ay qabtaan. Hagahan iyo bandhigyada ku saabsan hagaha, jawaabaha su'aalaha badanaa la isweydiiyo, waraaqaha boostada iyo xaashiyaha waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah ee Caafimaadka Guud. Intaas waxaa sii dheer, sanballada marinnada neefsashada waxaa laga qaadayaa dadka raacaya qeexitaanka kiisaska suurtagalka ah waxayna ku go'doon yihiin xaaladaha xarunta caafimaadka ilaa natiijada saamiga laga soo baxayo.
13. Sawirka kamarada kuleylka ma yahay cabir ku filan?
Kaamirooyinka kuleylka ayaa loo adeegsadaa in lagu ogaado dadka qandho iyo in la sameeyo baaritaanno dheeri ah oo ku saabsan bal inay cudur qaadaan iyagoo dadka kale uga taga. Dabcan, Suuragal ma aha in la ogaado bukaanka iyada oo aan qandho lahayn ama kuwa weli ku jira marxaladda cudurka iyo weli aan cudurka qabin. Si kastaba ha noqotee, maadaama aysan wali jirin hab kale oo dhakhso leh oo waxtar badan oo loo isticmaali karo iskaanka, wadamada oo dhan waxay adeegsadaan kaameeraha kuleylka. Ka sokow kaamirooyinka kuleylka, rakaabka ka yimaada aagagga halista waxaa lagu ogeysiiyaa luqado kala duwan diyaaradda, iyo waraaqo macluumaad oo ku diyaarsan luqadaha ajnabiga ah ayaa lagu qeybiyaa goobaha baasaboorka.
14. Ma jiraa talaal cusub oo ah Coronavirus (2019-nCoV)?
Maya, wali ma jiro talaal la soo saaray.Waxaa la soo sheegay in talaal si nabdoon loogu isticmaali karo aadanaha inkasta oo horumarka tignoolojiyada la soo saari karo sanadka ugu horeeya.
15. Maxay yihiin soojeedimaha ku saabsan qaadista cudurka?
Mabaadiida aasaasiga ah ee la soo jeediyay in lagu yareeyo halista guud ee gudbinta cudurada ku dhaca neefsashada ayaa sidoo kale quseeya New Coronavirus (2019-nCoV). Kuwani waa:
- Nadiifinta gacmaha waa in la qaddariyo. Gacmaha waa in lagu dhaqo saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sekan, iyo aalkolada gacmaha ee alkolada leh waa in loo adeegsadaa maqnaanshaha saabuun iyo biyo. Looma baahna in la isticmaalo saabuun leh jeermis dilaa ama bakteeriyada dila bakteeriyada, saabuunta caadiga ah ayaa ku filan.
- Afka, sanka iyo indhaha waa in aan taaban iyagoon gacmaha dhaqin.
- Dadka jiran waa inay ka fogaadaan taabashada (haddii ay suurta gal tahay, ugu yaraan 1 m meel fog)
- Gacmaha waa in si joogto ah loo maydhaa, gaar ahaan ka dib markay si toos ah ula xiriiraan dadka jiran ama deegaankooda.
- Maanta, looma baahna in dad caafimaad qaba ay adeegsadaan maaskaro dalkeena. Qofka ka cabanaya wax kasta oo ah faayraska neef-mareenka waa inuu ku daboolaa sankiisa iyo afkiisa warqad warqad lagu tuuro inta lagu jiro qufaca ama hindhisada, haddii aysan jirin warqad warqad ah, isticmaal xusulka gudaha, haddii ay suuroggal tahay, ha gaarin meelaha dadku ku badan yihiin, haddii loo baahdo, afkiisa iyo sanka xirkiisa, isagoo adeegsanaya maaskaro caafimaad haddii ay suuroggal tahay. waxaa lagula talinayaa.
16. Maxay tahay in dadka ay tahay inay u safraan wadamada leh cufnaanta badan ee bukaanka, sida Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, inay sameeyaan si looga hortago cudurka?
- Gacmaha waa in si joogto ah loo nadiifiyo, gaar ahaan ka dib markay si toos ah ula xiriiraan dadka buka ama deegaankooda.
- Hadday suurtagal tahay, waa inaan lagu booqan xarumaha caafimaadka sababa la xiriira bukaanka, iyo la xiriirka bukaannada kale waa in la yareeyaa markii ay lagama maarmaan tahay in la aado xarunta caafimaadka.
- Markaad qufacayso ama hindhisayso, sanka iyo afka waa in lagu daboolaa warqad nuug ah oo la tuuro, kiisaska aysan jirin warqad warqad ah, meesha xusulku ku yaallo waa in la adeegsadaa, haddii ay suurogal tahay, waa inaan lagu galin meelaha buuq badan, haddii ay lagama maarmaan tahay in la galo, afka iyo sanka waa in la xiraa, oo maaskaro caafimaad ayaa la isticmaalayaa.
- Cunista waxyaabaha xayawaannada ah ee cayriin ama hoosta ku jira waa in laga fogaadaa. Cuntooyinka si wanaagsan loo kariyey waa in la doorbido.
- Meelaha khatarta sare leh ee cudurrada guud, sida beeraha, suuqyada xoolaha iyo meelaha xoolaha lagu gowraco, waa in laga fogaadaa.
- Haddii ay jiraan astaamo neefsasho 14 maalmood gudahood ka dib safarka, maaskaro waa in lagu dhejiyaa rugta caafimaadka ee kuugu dhow, waana in dhaqtarka loo sheegaa taariikhda safarka.
17. Maxay tahay in dadka u safraya dalal kale ay sameeyaan si looga hortago cudurka?
- Marka aad qufacayso ama hindhisayso, sanka iyo afka waa in lagu daboolaa warqad nuqul la tuuri karo, kiisaska aysan jirin warqad warqad ah, xusulka gudaha waa in la istcimaalaa, haddii ay suuroggal tahay, waa inaan lagu soo gelin meesha dadku isugu yimaado.
- Cuntooyinka la kariyey waa in laga doorbido cuntooyinka cayriin.
18. Ma waxaa jirta halis ah in cudurka coronavirus-ka laga qaado baakadaha ama alaabada ka soo baxday Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha?
Guud ahaan, fayrasyadan waxay sii jiri karaan muddo gaaban, sidaa darteed wax faddarayn ah oo xirmo ama xamuul ah lama filayo.
19. Ma waxaa jira halista cudur cusub oo ah coronavirus-ka dalkeena?
Dalkeena wali kiisas kama jiraan. Sida dalal badan oo adduunka ah, waxaa jira suurogal in kiisas ay ka dhacaan waddankeenna. Ururka Caafimaadka wax xadidan kuma lahan arrintan.
20. Ma jiraan xayiraad safar oo Shiinaha ah?
Dhammaan duullimaadyada tooska ah ee ka yimaada Shiinaha waxaa la joojiyay 5 Febraayo 2020 illaa Maarso 2020. Golaha Latalinta Sayniska ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa uga digaya oo keliya PRC "inaan la aadin haddii aysan lagama maarmaan ahayn". Socdaalku waa inuu raaco digniinta masuuliyiinta qaran iyo kuwa caalamiga ah.
21. Sidee baa loo dalxiisikaraa gawaarida?
Waxaa lagu talinayaa in gawaaridaasi si hawo leh u hawo qaataan oo nadiifinta guudna lagu sameeyo biyo iyo saabuun. Waxaa lagu talinayaa in baabuurta la nadiifiyo ka dib isticmaal kasta, haddii ay suurtagal tahay.
22. Maxay yihiin taxadarka ay tahay in la qaddariyo inta lagu safrayo gawaarida dalxiiska?
Waa in la hubiyo in gawaarida si isdaba joog ah hawo hawo leh loo isticmaalo marka la isticmaalayo Hawo qaadashada, waa in la doorbido kuleylka iyo qaboojinta hawada iyadoo laga qaadayo hawada dibedda. Gawaarida ku-beddelashada hawada waa inaan la isticmaalin.
23. Huteel, hoteel, iwm ee martida si wada jir ah u imaanaysa. Ma jiraan halista jirada ee shaqaalaha loo xilsaaray markay yimaadaan gurigooda?
Martida, ee wata alaabtooda shaqsiyadeed, sida boorsooyinka, looma filaan inay noqdaan kuwo faafa (waxay qatar u yihiin faafitaanka cudurka) xitaa haddii fayrasku uusan ku noolaan karin meelaha aan nooleyn waqti dheer. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, ka dib qaabsocodyada noocan oo kale ah, gacmaha waa in si dhaqso leh loo dhaqo ama gacanta lagu nadiifiyo aalkolada gacanta ku saleysan alkolada
Intaas waxaa sii dheer, haddii ay jiraan marti ah oo ka imanaya gobollada ay cudurku ku badan yahay, haddii qandho, hindhisto, qufac ka dhex timaado martida, waxaa la doorbidayaa in ay xidhaan maaskaro caafimaad qofkan iyo darawalku in ay xidhaan maaskaro caafimaad is-difaaca. Waa in la hubiyaa in 112 la waco oo macluumaad la siiyo ama hay'adda caafimaadka ee la hago la wargeliyo kahor.
24. Maxay yihiin tillaabooyinka laga qaadayo hoteelada?
Nadiifinta caadiga ah ee biyo iyo saabuun waa ku filan xarumaha jiifka. Fiiro gaar ah waa in la siiyaa dusha sare ee ay had iyo jeer taabato gacmaha, gacanta albaabka, baytariyada, qalabka gacanta, musqusha iyo nadiifinta weelka. Ma jiraan wax caddeyn ah oo saynis ah oo ku saabsan adeegsiga dhowr alaabo oo la sheeganayo inay si gaar ah waxtar ugu yihiin fayraskan inay bixiyaan difaac dheeri ah.
Feejignaanta waa in lagu bixiyaa nadiifinta gacanta. Gacmaha waa in lagu dhaqo saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sekan, iyo aalkolada gacmaha ee alkolada leh waa in loo adeegsadaa maqnaanshaha saabuun iyo biyo. Looma baahna in la isticmaalo saabuun leh jeermis dilaa ama bakteeriyada dila bakteeriyada, saabuunta caadiga ah ayaa ku filan.
Qofka ka cabanaya wax kasta oo ah faayraska neef-mareenka waa inuu ku daboolaa sankiisa iyo afkiisa warqad warqad lagu tuuro inta lagu jiro qufaca ama hindhisada, haddii aysan jirin warqad warqad ah, isticmaal xusulka gudaha, haddii ay suuroggal tahay, ha gaarin meelaha dadku ku badan yihiin, haddii loo baahdo, afkiisa iyo sanka xirkiisa, isagoo adeegsanaya maaskaro caafimaad haddii ay suuroggal tahay. waxaa lagula talinayaa.
Maadaama fayrasku uusan ku noolaan karin dusha sare ee nolosha aan nooleyn waqti dheer, wax faddarayn ah looma filayo dadka sidda boorsooyinka bukaanka.Waxaa ku habboon in la dhigo sunta gacmaha ee aalkolada leh meelaha la heli karo.
25. Maxay yihiin tillaabooyinka ay tahay inay shaqaalaha garoonka diyaaradaha qaadaan?
Tallaabooyin guud waa in la qaado si looga hortago infekshinka.
Maadaama fayrasku uusan ku noolaan karin dusha sare ee nolosha aan nooleyn waqti dheer, wax faafin ah looma filayo dadka sidda boorsooyinka bukaanka. Waa habboon tahay in lagu rido gacmaha sunta aalkolada meelaha la heli karo.
26. Taxadar noocee ah ayay tahay in shaqaalaha ka shaqeeya makhaayadaha iyo dukaamada ay dalxiisayaashu ka yimaadeen?
Tallaabooyinka ilaalinta guud ee cudurka waa in la qaado.
Nadiifinta caadiga ah ee biyo iyo saabuun ayaa ku filan nadiifinta dusha sare. Fiiro gaar ah waa in la siiyaa nadiifinta gacantooda albaabka, tubbada biyaha, maacuunta, musqusha iyo sagxadaha gacmaha. Ma jiraan wax caddeyn ah oo saynis ah oo ku saabsan adeegsiga dhowr alaabo oo la sheeganayo inay si gaar ah waxtar ugu yihiin fayraskan oo keenaya ilaalin dheeraad ah.
Waa habboon tahay in lagu rito sunta aalkolada leh ee alkolo ka sameysan meelaha la heli karo.
27. Maxay yihiin tillaabooyinka guud ee looga hortago cudurka?
Inta lagu jiro qufaca ama hindhisada, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo sanka iyo afka warqad waraaq ah oo la tuuro, haddii unugyada aan la heli karin, suxulka u isticmaal gudaha, haddii ay suurogal tahay inaadan galin meelaha dadku badan yihiin.
28. Waxaan u dirayaa ilmahayga dugsiga, cudurka Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV) ma qaadi karaa cudurka?
Cudurka cusub ee coronavirus (2019-nCoV) oo ka bilaawday Shiinaha ayaan laga helin dalkeenna ilaa maanta waxaana la qaaday tillaabooyin muhiim ah si looga hortago inuu soo galo cudurka dalkeena. Ilmahaagu waxaa laga yaabaa inuu la kulmo fayras sababa ifilada, hergabka, iyo hargabka dugsiga, laakiin looma filayo inuu la kulmo maxaa yeelay Coronavirus-ka cusub (2019-nCoV) ma ahan wareegga. Macnaha guud, macluumaadka lama-huraanka ah waxaa siiyay Wasaaradda Caafimaadka.
29. Sidee ayaa loo nadiifiyaa dugsiyada?
Nadiifinta caadiga ah ee biyaha iyo waxa ku filan waa biyo nadiifinta iskuulada. Fiiro gaar ah waa in la siiyaa nadiifinta gacantooda albaabka, tubbada biyaha, maacuunta, musqusha iyo sagxadaha gacmaha. Ma jiraan wax caddeyn ah oo saynis ah oo ku saabsan adeegsiga dhowr alaabo oo la sheeganayo inay si gaar ah waxtar ugu yihiin fayraskan inay bixiyaan difaac dheeri ah.
30. Markaan soo laabto fasaxa semesterka, waxaan ku noqonayaa jaamacad, waxaan ku sii jeedaa ardeyda, ma qaadi karaa cudurka New Coronavirus (2019-nCoV)?
Cudurka cusub ee coronavirus (2019-nCoV) oo ka bilaawday Shiinaha ayaan laga helin dalkeenna ilaa maanta waxaana la qaaday tillaabooyin muhiim ah si looga hortago inuu soo galo cudurka dalkeena.
Hargabku wuxuu la kulmi karaa fayras sababa hargab iyo hargab, laakiin looma filayo inuu la kulmo maadaama cudurka cusub ee 'Coronavirus' (2019-nCoV) uusan ahayn wareegga dhiigga. Macnaha guud, macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan cudurka waxaa bixiyay Machadka Tacliinta Sare, Machadka Daraasaadka amaahda iyo ardayda la midka ah ee xarumaha jiifka.
31. Xayawaanka guri joogtu ma qaadi karaan oo gudbin karaan cudurka New Coronavirus (2019-nCoV)?
Xayawaanka gurijoogta ah, sida bisadaha / eeyaha, looma filayo inay ku bukoonaan cudurka loo yaqaan 'New Coronavirus' (2019-nCoV). Si kastaba ha noqotee, ka dib marka la taabto xayawaanka rabaayadda ah, gacmaha waa in had iyo jeer lagu maydhaa saabuun iyo biyo. Sidaas darteed, ka hortag ayaa laga bixin doonaa cudurada kale ee laga qaadikaro xoolaha.
32. Sankaaga biyo cusbo ku maydh karaa ma ka hortagi kartaa infekshanka cusub ee Coronavirus (2019-nCoV)?
No. Ku maydhista sanka si joogto ah brine wax faa iido ah kama leh difaacida fayraska New Coronary virus (2019-nCoV).
Khamrigu ma isticmaali karaa kahortagga cudurka cusub ee coronavirus (33-nCoV)?
No. Isticmaalka khalku wax faa iido ah kama leh ka hortagga infekshanka cudurka New Coronavirus (2019-nCoV).
Links la xiriira la System Tareenka ee Turkey
Guddoomiyaha Kocaoğlu, Su'aalaha ku Saabsan Gaadiidka Telefishinka Aegean
Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy-Waxaad sheeganeysaa Muuqaalka Masawirka ee Eagle